October 7, 2019 - khitalinmedia
October 7, 2019 Khitalin Media 0
ပြည်ထဲရေးကပါ အတည်ပြုထားတဲ့ သတင်းအရ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ မူးယစ်မှုဖြင့် ရန်ကုန်မြို့က မြန်မာပလာဇာမှာ အဖမ်းခံရတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ အနုပညာရှင် အဆိုတော်ဖြစ်တာကြောင့် ဝမ်းနည်းနေရသူ ဖြိုးပြည့်စုံရဲ့ ဂီတပရိသတ်များလည်း ရင်နင့်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံ ဆေးမှုနဲ့ ထိန်းသိမ်းခံထားရတာဟာ ဗီဒီယိုဖိုင် သက်သေနဲ့တကွ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် ပေါ်မှာ တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီး […]
နားကြပ်အမြဲတပ်လေ့ရှိသူတွေ သိထားသင့်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျို
နည်းပညာက တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ ပိုတိုးတက်လာနေချိန်မှာ လူသားတွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ရလဒ်ဆိုးတွေရှိနေနိုင်တဲ့ ဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေ၊ အသုံးအဆောင်တွေနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေခဲ့ပါတယ်။ Headphone နဲ့ နားကြပ်တွေဟာလည်း နောက်ကွယ်ကဆိုးကျိုးတွေကို မသိကြဘဲ ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေ အသုံးများတဲ့ နည်းပညာပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ နားကြပ်လေးတပ်ပြီး သီချင်းနားထောင်ကြတဲ့သူတွေကို ရထားပေါ်၊ ဘတ်စ်ကားပေါ်၊ လမ်းပေါ်၊ နေရာတကာမှာ တွေ့နေရသလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်အပန်းပြေဖို့၊ […]
၀ါကျွတ်တော့မယ််ဆိုတော့ ဒီစာလေးကို ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်သွားပါနော်
ကဲ…ဝါကျွတ်တော့မယ်ဆိုတော့ ဒါလေးဖတ်ပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်စာလာပို့ပါနော်…. သိသိမသိသိ တစ်လမ်းလုံး တစ်ရပ်ကွက်လုံး လိုက်လိုက်မဖိတ်ပါနဲ့နော်.. သွားလို့မှ ကိုယ့်လည်းသူမသိ သူ့လည်းကိုယ်မသိ မျောက်အိုကြီးလို အူကြောင်ကြောင်ထိုင်နေရမယ့်ပွဲကို မလာနိုင်ပါဘူး။ နေတာက မြို့စွန်မြို့ဖျား ဆောင်တာက မြို့လည်ခေါင်ဟိုတယ် ကားရှိလည်း ကိုယ့်ကားကိုယ်မောင်းသွားရမှာ ကားမရှိရင် ကားငှားသွားရမှာ လက်ဖွဲ့နဲ့ဆီဖိုးနဲ့ taxiခ နဲ့ အရမ်းခင်လို့ […]
သားယောကျင်္ား အမွှာလေး မွေးပေးလို့ဂုဏ်ပြုရမယ်လို့တွေးထားတဲ့ အတွေးတွေ ခုတော့ လွင့်စင်ပပျောက်ကုန်ပြီ
အခုဖြစ်ရပ်ကို ကိုယ်တွေ့ကြုံပြီး ဘဝလောကဓံဆိုးကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသူ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် အကောင့်ပိုင်ရှင် ကို Nay Min ရဲ့ ရင့်နင့်ဖွယ်ရာ ရင်နာဖွယ်ရာ ပို့စ်တခုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သူရဲ့ဇနီးသည်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့၊ မနက် ၇ နာရီအချိန်မှာ အမြွှာပူးသားငယ်နှစ်ဦးကို မီးဖွားပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ […]
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားသူတွေ အားလုံ့းနီးပါးမှာ တွေ့ရတဲ့ ရှေ့ပြေးလက္ခဏာ ( ၇ )ခု
(၁) အလုံးအကျိတ်များ သို့မဟုတ် အနာများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း အရေပြား နဲ့ ရင်သားကင်ဆာများမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ရင်သားနဲ့ချိူင်းအောက်တွင် မာကျောသောအဖုများစမ်းမိခြင်း၊ အရေပြား တွင် အကွက်များဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အလုံးအကျိတ်တစ်ခုရဲ့အလည်တည့်တည့်တွင် အနာစိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ မွေးရာပါအမှတ်ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန် သို့ အရွယ်ပြောင်းလဲခြင်း (၂)နာတာရှည်ချောင်းဆိုးခြင်း အဆုတ်ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပြီး အောက်ပါလက္ခဏာများရှိမရှိ ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။ […]
မီးဖိုချောင်ထဲက ပစ္စည်း ၄ မျိုးနဲ့ ဆံပင်ကို သဘာဝ နည်းလမ်းအတိုင်း ဖြောင့်စင်းစေမယ့် နည်းလမ်း
မီးဖိုချောင်မှာ အလွယ်တကူ ရှာလို့ရတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်း ၄ မျိုးကို သုံးပြီး သဘာဝအတိုင်း ဆံပင်ဖြောင့်မယ် Beauty Salon မှာ ဆံပင်ဖြောင့်ရင် ငွေကုန်ကြေးကျ များပါတယ်နော် ။ ဒါ့အပြင် ဆံပင်အသေဖြောင့်တယ်ဆိုပေမယ့် ၁ နှစ်လောက်ပဲ စိတ်ချမ်းသာရပြီး ဆံပင်အဖျားမှာ နှစ်ခွဖြစ်တာ ဆံသားကြမ်းတာတွေ ဖြစ်လာတော့တာပဲ။ […]
တစ်ပါတ်စာအထူးဟောစာတမ်းဗေဒင် (အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့ မှ ၁၃ ရက်နေ့အထိ)
တစ္ပါတ္စာအထူးေဟာစာတမ္းေဗဒင္ (ေအာက္တိုဘာလ ၇ ရက္ေန႔ မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ) တနလၤာ သင္၏ အလုပ္အကိုင္မွာေကာင္းေနပါသည္။ ဒီအခ်ိန္မွာသင္စိတ္ဓာတ္မက်ဖို႔ေတာ့အေရးႀကီးပါတယ္။ အလုပ္အကိုကလည္းအနည္းငယ္စိတ္ညစ္စရာေလးေတြေတာ့ရွိေနတတ္ပါသည္။ မေမွ်ာလင့္ပဲသင့္အတြက္ျပည့္စံုမႈ႕ေတြလည္းေရာက္ရွိလာပါလိမ့္မည္။ စီးပြါးေရးလည္းေကာင္းလာပါလိမ့္မယ္။ ၀န္ထမ္းမ်ားျဖစ္ပါက အေျခေနေတြတိုးတက္လာပါလိမ့္မည္။ အလုပ္ေနရာေကာင္းေတြလည္းရရွိလာပါလိမ့္မည္။ ယခုအပတ္တြင္းလုပ္ငန္းသစ္စတင္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါကအလြန္ေကာင္းပါသည္ လုပ္ျဖစ္ေအာင္လုပ္ပါအက်ိဳးေပးပါလိမ့္မည္။ သင္၏ေငြေၾကးကံမွာလည္းေကာင္းေနပါသည္။ သင္ရစရာရွိတာေတြလည္းျပန္လည္ရရွိပါလိမ့္မည္။ က်န္မာေရး၀မ္းဗိုက္ေတာ့ခဏခဏေအာင့္တတ္ပါသည္။စိုးရိမ္စရာမလိုပါ။ ပညာေရး မွာေကာင္းေနပါသည္ ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြလည္းရရွိပါလိမ့္မည္။ […]
ကလေးတွေ အရမ်းကြျိုက်တဲ့ ဂျယ်လီဗူးတွေ ဒီလိိုလုပ်ထားတာပါတဲ့ လုံးဝမစားသင့်ပါဘူးတဲ့နော် … ဂျယ်လီဗူးဟာကလေးတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးကိုဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ် …. မိဘများက ကိုယ့်ရဲသားသမီးများကို အထူးဂရုဆိုက် စေချင်ပါတယ်နော် … ဂျယ်လီတွေဟာ ကင်ဆာရောဂါကိုလည်း ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်… ကျန်းမာရေးကို ဘယ်ကြောင့်ထိခိုက်စေလည်းဆိုတာကို ဖော်ပြ ဗွီဒီယိုက်ို ဆုံးခန်းတိုင်းအောင်ကြည့်သွားပါနော် … […]
အွန်လိုင်းမှာ ပျံ့နှံ့နေတဲ့မြိတ်မြို့က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေး နဲ့ နှာဗူး ဆရာဝန် ကိစ္စ
ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာရွိတဲ့ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးကိုေဆးကုသေပးကာအတင္းကိုင္တြယ္တဲ့ဆရာဝန္တစ္ဦးကိုရဲတပ္ဖြဲ႕မွဖမ္းဆီးကာအမႈ႔ဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္းသိရပါတယ္။စက္တင္ဘာလရရက္ေန႔မနက္ပိုင္းကမ်က္စိနာ(ေဒသအေခၚမ်က္ကန္းေဝဒနာ)အတြက္ေဆးကုသရန္လာေရာက္တဲ့အသက္၁၈ႏွစ္အရြယ္ဒုတိယႏွစ္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေလးတစ္ဦးကိုၿမိတ္ၿမိဳ႕၊ကံႀကီးရပ္ကြက္၊ကံႀကီးစည္လမ္းတြင္ေဆးခန္းဖြင့္ထားတဲ့ေဒါက္တာဝင္းလိုက္ဆိုသူဆရာဝန္တစ္ဦးကအတင္းကိုင္တြယ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ေဆးခန္းမွာလူျပတ္ေနတဲ့အခ်ိန္တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေလးကိုေဆးကုေပးေနစဥ္ ဘယ္ဘက္လက္ႏွင့္ သူမရဲ့မိန္းမကိုယ္အတြင္းကိုလက္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ထိုးသြင္းခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ေက်ာင္းသူေလးကထိုသို႔မလုပ္ရန္ေျပာကာ႐ုန္းေပမယ့္ေဆးထိုးအပ္ခ်ကာညာဘက္လက္နဲ႔ထပ္မံထိုးသြင္းပါတယ္။ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူေလးမွာ႐ုန္းကန္တြန္းဖယ္ကာေဆးဖိုးက်ပ္ေလးေထာင္ေပး၍အိမ္သို႔ျပန္ကာအဖြားျဖစ္သူနဲ႔အေဒၚျဖစ္သူတို႔ကိုတိုင္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရပါတယ္။ Credit – Myanmar TV – ရုပ္ရွင္ သီခ်င္း ဟာသ သတင္း Zawgyi မြိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကိုဆေးကုသပေးကာအတင်းကိုင်တွယ်တဲ့ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှဖမ်းဆီးကာအမှု့ဖွင့်အရေးယူထားကြောင်းသိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလရရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမျက်စိနာ(ဒေသအခေါ်မျက်ကန်းဝေဒနာ)အတွက်ဆေးကုသရန်လာရောက်တဲ့အသက်၁၈နှစ်အရွယ်ဒုတိယနှစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတစ်ဦးကိုမြိတ်မြို့၊ကံကြီးရပ်ကွက်၊ကံကြီးစည်လမ်းတွင်ဆေးခန်းဖွင့်ထားတဲ့ဒေါက်တာဝင်းလိုက်ဆိုသူဆရာဝန်တစ်ဦးကအတင်းကိုင်တွယ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ဆေးခန်းမှာလူပြတ်နေတဲ့အချိန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးကိုဆေးကုပေးနေစဉ် ဘယ်ဘက်လက်နှင့် သူမရဲ့မိန်းမကိုယ်အတွင်းကိုလက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်ထိုးသွင်းခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျောင်းသူလေးကထိုသို့မလုပ်ရန်ပြောကာရုန်းပေမယ့်ဆေးထိုးအပ်ချကာညာဘက်လက်နဲ့ထပ်မံထိုးသွင်းပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးမှာရုန်းကန်တွန်းဖယ်ကာဆေးဖိုးကျပ်လေးထောင်ပေး၍အိမ်သို့ပြန်ကာအဖွားဖြစ်သူနဲ့အဒေါ်ဖြစ်သူတို့ကိုတိုင်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ Credit – Myanmar […]